Sanco: Idinga ukusukunyelwa eyokujikijelwa kwezimoto ngamatshe | News24
Sanco: Idinga ukusukunyelwa eyokujikijelwa kwezimoto ngamatshe
Johannesburg – ISouth African National Civic Organisation isizigxekile izigameko zokujikijelwa kwezimoto ezidlulayo ngamatshe asuka emabhulohweni, KwaZulu-Natal.
Kwashona umfana oneminyaka engu-7 ubudala nowesifazane ngesikhathi imoto ababehamba ngayo ishaywa ngetshe behamba ku-N2 phakathi kwasoThongathi naseBallito, enyakatho yeTheku, ngomhlaka-28 Disemba, kwathi esinye isigameko senzeka ngempelasonto lapho kulimale khona kabi owesilisa, 30.
ISanco inxuse iziphathimandla zaKwaZulu-Natal ukuba zithathe izinyathelo ezinqala ukuqinisekisa ukuthi lezi zigameko ziyagwemeka.
"Kumele kutshalwe abazoqapha okwenzeka emabhulohweni kuphinde kufakwe namakhamera ukuze kugwemeke lezi zigameko," kusho okhulumela iSanco uJabu Mahlangu.
OLUNYE UDABA: Kuphume imiphefumulo ngetshe eliwele emgwaqeni e-KZN
"Amaphoyisa aKwaZulu-Natal athi kulimale kabi owesilisa ngesikhathi imoto yakhe ijikijelwa ngetshe ngabo-22:00 ngoMgqibelo ebusuku ehamba ku-N2 ngasoThongathi, wabe esephuthunyiswa esibhedlela," esho.
UMahlangu uthe lezi zigameko zidinga ukusukunyelwa ukuze kuthunyelwe umyalezo onqala kulabo abenza okubi.
"Kumele kujutshwe ithimba elizoqinisekisa ukuthi abashayeli bavikelekile kula bantu abanezinhliziyo ezimbi abangenandaba nempilo yomuntu," esho.